January 1, 2022 - Online Hartha
ဆောင်းရာသီမှာ အသားအရေ GLOW နေစေဖို့ ပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့ အလှအပထိန်းသိမ်းနည်း (၇) မျိုး
January 1, 2022 by Online Hartha
ဆောင်းရာသီမှာ အသားအရေ GLOW နေစေဖို့ ပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့ အလှအပထိန်းသိမ်းနည်း (၇) မျိုး ရာသီဥတုအေးလာတာနဲ့အမျှ ပုံမှန်ထက် အသားခြောက်လာတာ၊ အသားအရေကြမ်းတမ်းလာတာနဲ့ အသားအရောင်မွဲလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာကြောင့် ဒါတွေမဖြစ်ရအောင် ဆောင်းရာသီအဝင်ကတည်းက အကျင့်ပြုလုပ်ထားသင့်တဲ့သဘာဝအသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းတွေ အကြောင်းကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဖော်ပြထားတဲ့ Skincare နည်းတွေက လုပ်ရလွယ်တဲ့အပြင် သင့်အသားအရေကို ခြောက်သွေ့ခြင်းကင်းပြီး နေရောင်ထိုးထားသလို အမြဲ Glow နေစေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ၁=Alcohol နဲ့အမွှေးနံ့ပါတဲ့ Skincare ပစ္စည်းတွေရှောင်ပေးပါ Cosmetic တွေမှာပါဝင်တဲ့ အမွှေးနံ့လို ဓာတုပစ္စည်းတွေက အသားခြောက်ပြီးယားယံခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်တာကြောင့် ဒီလိုရာသီမှာ အနံ့နဲ့ Alcohol ဓာတ်တွေမပါဝင်တဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေး၊ Toner တွေကိုအသုံးပြုပေးဖို့လိုပါတယ်။ ၂=ထောပတ်သီးနဲ့ သံလွင်ဆီတို့ အသုံးပြုပြီးမျက်နှာပေါင်းတင်ပေးပါ သံလွင်ဆီဟာဆိုရင် အသားအရေနဲ့ဆံသားတို့ကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးနိုင်ပြီး အညစ်အကြေးတွေ သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့အဆီတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီနဲ့ … Read more
လူတိုင်းနီးပါး မုန့်ဟင်းခါးထဲ ထည့်စားတတ်တဲ့ အကြော် ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ
လူတိုင်းနီးပါး မုန့်ဟင်းခါးထဲ ထည့်စားတတ်တဲ့ အကြော် ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ မြန်မာတွေကြိုက်လှတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး မှာ ပါတဲ့ အကြော် ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဒီနေ့ မြောက်ပြင်ဘက်သွားရင်း မုန့်ဟင်းခါးသည်မြင်တော့ ဗိုက်ဆာတာနဲ့ ဝင်စားမိတယ်…။ အရမ်းကြိုက်တာလဲ ပါတာပေါ့…. ဟယ် ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်ဆိုပီး အကြော်ပိုလေးနဲ့ ဟင်းရည်လေးတောင် တောင်းသောက်လိုက်သေးတယ်….။ အကြော်လေးကကောင်းလိုက်တာဆိုပီး အကြော် လေး ၂၀၀ဖိုး အပိုရောင်းပေးပါဆိုပီး စားမိတော့ အရမ်းကြိုက်ပီး အထုတ်ကြီး တထုတ်လောက် ထပ်ရောင်းပေးပါ လို့ ဝယ်ရော….။ ဇာတ်လမ်းကအဲ့မှာစတာပဲ အပိုမရှိတာမို့ ရောင်းပေးလို့မရလို့ပါတဲ့ အာ့နဲ့ ကိုယ်တွေကလည်းကြိုက်မိရင်ဇွတ်ဆိုတော့ပိုက်ဆံ ပေးခဲ့ပါမယ် နက်ဖြန်မှ လာယူပါ့မယ်ပြောမိရော…။ (သူ့အကြော်ကလည်း မွ ရွပြီး ကောင်းတာကို) ကိုယ်ပုံကြည့်ပီး ဇွတ်စားတော့မယ်ရိပ်မိသွားတ ဲ့ ဆိုင်ရှင်က ဘယ်လိုစားမှာလည်းတဲ့ …. … Read more
မိခင်တစ်ယောက်၏ အလှပဆုံးသော မုသားစကားကြီး ရှစ်ခွန်း
မိခင်တစ်ယောက်၏ အလှပဆုံးသော မုသားစကားကြီး ရှစ်ခွန်း ကျွန်တော် ကလေးဘဝအရွယ်တုံးက အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာ နေ့စဉ်ထမင်းနပ်မှန်အောင် စားဖို့တောင် မသေချာတဲ့နေ့တွေရှိခဲ့တယ် ။ ဒါပေမဲ့ အမေကတော့ မကြာခဏ သူ့ပန်းကန်ထဲက ထမင်းတွေကိုယူယူပြီး ကျွန်တော့်ထဲ အမြဲထည့်ထည့်ပေးတတ်တယ် ။ ပြီးရင် အမေပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ် ။ “စား .. ငါ့သား အမေ သိပ်မဆာဘူး..” အဲ့ဒါ ကျွန်တော် သိတတ်စအရွယ်က အမေ့ရဲ့ ပထမဆုံး မုသားစကားလေးပါ။ ကျွန်တော် နည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ ပိန်လှီသေးကွေးရှာတဲ့ ကျွန်တော့်ကို အာဟာရဓါတ်ပြည့်ဝစေချင်တဲ့စိတ်န ဲ့ အိမ်ဘေးနားက မြစ်ကမ်းနံဘေးမှာ အမေရယ် ကျွန်တော်ရယ် ငါးသွားမျှားတယ် ။ အဲ့ဒီနေ့က ငါးနှစ်ကောင်မိတော့ အမေ ငါးဟင်းချိုလုပ်တိုက်တယ် ။ ကျွန်တော် … Read more
အဖုအကျိတ်ရှိနေလျှင် လက်တွေ့ကြုံမှ ဆေးမြီးတိုကို ယုံမိပါသည်။ အဖုအကျိတ်ဖြစ်၍ သိပ္ပံဆေးဝါးဖြင့် ကုသရန်ခက်ခဲနေသူများအား ထိလည်းထိရောက် ငွေကုန်ကြေးကျနည်းပါးလှသည့်မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးမြီး တို နည်းလေးအား ဝေငှပေးခဲ့ ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကြိုးများလည်းမရှိပါသောကြောင့် စိတ်ချယုံ ကြည်စွာ သုံးနိုင်ပါသည်။ နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းမှ အဖုအကျိတ်အတွက် မန်ကျည်း၊ ထုံး၊ ပျား ကိုသုံးကြမှထုတ်နုတ်ဖေါ်ပြပါသည်။ ရေးသူ(ဦးဇော်ဝင်း -ကုန်းဇောင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံ)။ ဆေးနည်း – (၁) ထုံး(ကွမ်းစားထုံး)။ (၂) မန်ကျည်းမှည့်(အစေ့မပါ)။ (၃) ပျားရည်စစ် ။ ထိုသုံးမျိုးကို အဖုအကျိတ်အရွယ်ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး ဆတူရော၍လက်ဖဝါးပေါ်တွင် နာနာပွတ်ပြီးနယ်ပေါင်းပေးပါ။ လက်ဖဝါးပေါ်တင်ကာနယ်ထားသောထုံး၊မန်ကျည်းမှည့်၊ပျားရည်တို့ မျှတစွာရောစပ်သွားသောဆေးကိုအဖုအကြိတ် ပေါ်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ အဖုအကျိတ်ပေါ် ဆေးတင်သောအခါ ပူသောအရ သာနှင့် အတွင်းသို့ဆွဲစုပ်သကဲ့သို့ခံစားရပါမည်။ပြန်ပြီးမခွာရပါ။ တစ်နေ့လျှင် ထိုဆေးကို(၃) ကြိမ်မျှတင်ပေးနိုင်ပါသည်။အဖုအကျိတ်ဖြစ်ကာစဆိုပါလျှင် ဆေးတင်လိုက်ပါက (၃/၄)ရက်အတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။ အဖုအကျိတ်ရင့်ပြီး ကိုက်ခဲနေလျှင်လည်း ဆေးတင်ပေးပါက … Read more
၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးယၾတာ…
လာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့ဟာ စနေနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့အတွက် နေ့နံအလိုက် နှစ်သစ်အကြို အထူးယတြာအစီအရင်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီယတြာကို နှစ်သစ်အစ ဇန်နဝါရီ (၁) ရက်မှာ စီရင်နိုင်ခဲ့ရင် တစ်နှစ်လုံး ဘေးကင်းရန်ကွာပြီး လိုရာပြည့်စေဖို့ အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဇန်နဝါရီ (၁) ရက် စနေနေ့ မနက် ၉ နာရီ ၂၅ မိနစ်နဲ့ ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်အတွင်း တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာ အိမ်ကဘုရားမှာ ကြေးဖလားနဲ့ သောက်တော်၊ သုံးတော်ရေ ကပ်လှူပါ။ “အရဟံ” ဂုဏ်တော်ကို သက်စေ့ထက် တစ်ခေါက်ပိုပြီး ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ။ ဒီနေ့မှာ နေမဝင်ခင်အထိ အဝစားထားသင့်ပြီး နေဝင်ပြီးရင် အစားအစာကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ … Read more